Ciidamada Badda Mareykanka Oo Ka Badbaadiyay 13 Qof Iran Kuwaso Afduub U Heysteen Burcad Badeeda Soomaaliya. - iftineducation.com
Ciidamada badda Mareykanka Jimcadi ayaa sheegay iney badbaadiyeen 13 qof oo u dhalatay Iran kuwaasoo afduub ay u heysteen burcad badeeda Soomaali ah ee gacanka cadmeed.
Markabka wax burburiyo Mareykanka ee xambaara gantaalada USS Kidd, mid ka tirsan tiimka maraakiibta dagaalka USS John C. Stennis oo kasoo baxay Gacanka maalmo kahor, ayaa wuxuu ka jawaabay qayladhaan gargaar dagdag ah ee kazoo yeeraayay markabka Iran Al Molai, ay afduubteen burcad badeeda Soomaaliya inkabadan 40 maalmood, sideey ku sheegeen war saxaafadeed ciidamada badda ee Mareykanka.
Hal tiim oo ka tirsan ciidamada badda Mareykanka USS Kidd oo wata helicopter ayaa aaday markabka Iran, ay u isticmaalaayeen burcad badeeda meeleykaga duulaan maraakiibta kale, waxeyna gacanta ku dhigeen 15 burcad badeed ah oo si dhaqsi isku dhiibay iska cabin la’aan.
Al Molai waxey afduub u heysteen burcad badeeda mudo dhan 40-45 maalmood, “Sido yiri Josh Schminky mid kamid ah shaqaalaha dowladda qeebta danbi barista ee markabka Kidd,
“Waxaa la afduubtay ayagoo sahay fican wadanin dana aminsanahay in ay danta ku kaliftay iney caawiyaan burcad badeeda si ay u afduubtaan maraakiib kale.”
Dadkan u dhashay Iran waa laso deyay waana lafasaxay iney u laabtaan wadankooda kadib markii timka ciidamada badda Mareykanka ay siiyeen cunto, biyo iyo daawo.
Howlgalkaan ayaa ku soo aaday ayadoo xurguf weyn u dhaxeyso dowlada Mareykanka iyo Iran, ayadoo sarkaal Irani ah ugu digay Washington talaadadii inow ku soo laabto markabkooda dagaalka gacanka.
USS John C. Stennis ayaa loo diray gacanka si uu ugu sameeyo indha indheyn 10-ka maalin ee tababarka ku sameynayaan ciidamada badda ee Iran laga soo bilaabo 24 Desember.
Mareykanka waa ka biyo diiday digniintas waxowna ku adkeystay inow udiraayo markabkiisa dagaalka Gacanka.
Iran oo ka jawaabeysa goodinta Mareykanka iyo xulufadiisa program nukler keeda, isbuuci hore aya waxey ku goodisay iney xereyso Hormuz, halka wado ugu badan ay soo marto shidaalka aduunka. Hadi suuqa geynta shidaalkeeda ay cuna qabateeyaan reer galbeedka.
Ayadoo ka jawaabeysa Pantegonka waxey xasusisay Iran in, faragelinta isticmaalka wadada Hormuz aysan kala gorgortami doonin (Aden).